Wednesday, February 20, 2019 10:56
Author: Yay Chan (Mandalay)
အထက်မြန်မာပြည်မှ စာရေးဆရာများ၏ထင်ရှားသောဝတ္ထုတိုများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားထုတ်ဝေထားပါသည်။ မြန်မာ့ဓလေ့၊ အညာအငွေ့အသက်များလွှမ်းထုံသောဝတ္ထုတို ၁၂ ပုဒ်ပါဝင်ပါသည်။ စာရေးဆရာများဖြစ်သော ချစ်စရာ၊ မောင်သာပို၊ ဆူးငှက်၊ ညီပုလေး၊ ဂျိုဇော်၊ မြို့သာမရာထို၊ ခိုင်နွယ်သန့် (မန္တလေး) နှင့် အောင်ပိုက်တို့၏ ၀တ္ထုတိုများကို ရေချမ်း (မန္တလေး) က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေး သားထားပါသည်။ မြန်မာမိသားစုများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အယူအဆ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ပျော်ရွှင်ရယ်မောဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကို ရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ခံစားမှုသာမက ဘာသာစာပေအရပါ နားလည် ခံစားနိုင်အောင် ဘာသာပြန်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ရေးသား ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ရသစာပေလေ့လာလိုသူ နိုင်ငံခြားသားတို့အတွက် အထူးသင့်လျော်သလို ဘာသာစကားလေ့လာလိုသူပြည်တွင်းစာဖတ်ပရိသတ်များလည်း ၀ယ်ယူဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းထားသင့်သောစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။
The Ayeyarwady river was flowing placidly and silently. The breeze was blowing gently, and the tips of the green banyan leaves were fluttering, pointing in the northerly direction like the needle ofacompass. Almost all of her laundress friends were present at the river bank and the pleasant tune of the morning song of the Gaw Wein was in the air: the sloshing sound of clothes on the rock boulder, the thud of the washing-bats and the swish of the teeth-worn plastic brushes. The ponna-pyan ferry motorboat was tooting its horn as it struggled to navigate the low water level of the Ayeyarwady, and the thirty-eight steep steps of the clay embankment were parched. Laundress Mi Lone, to pre-empt the others, dried her washed laundry on the rope of the ferry boat and on the coconut fibre-plaited thick rope of the steamer—lessening the chance of dust settling on the clothes. So there was no need to dust them unlike the ones which were spread on the embankment.